Antsohihy: Sady hametraka Governoran'ny Faritra Sofia no hankalaza ny 14 oktobra
dimanche, 13 octobre 2019 20:10
Hanamarika ny andron’ny alatsinainy 14 oktobra 2019 ny fametrahana ny Governora vaovao n'ny Faritra Sofia, Kolonely Lylison René de Rolland. Nosafidiny ny hametrahana azy amin’io 14 oktobra io noho io daty manan-tantara eto amin'ny firenena, nanambarana ny fijoroan'ny Repoblikan'i Madagasikara teny amin'ny efitrano filanonan'ny lycée Galliéni - Antananarivo.
Hatao eo amin’ny « Rond point Philibert Tsiranana » Antsohihy ny lanonana, sady ho fanomezam-boninahitra an’i Philibert Tsiranana, filohan'ny Repoblika teo aloha, sady Rain'ny fahaleovantena.
Hanafana ny lanonana ny tarika Din Rotsaka sy Dah'Mama ankoatra ireo mpanakanto zanaky ny Faritra.
Isan’ireo Governora raika ambin’ny folo lahy, andiany voalohany notendrena tamin’ny 25 septambra 2019 ny Kolonely Lylison René de Rolland. Senatera voafidy tamin’ny lisitra MAPAR tao amin’ny Faritany Mahajanga izy tamin’ny fifidianana natao ny desambra 2015, talohan'io fanendrena azy io.
Banga nandritra ny roa taona ngaragidina ny toerany tao amin’ny Lapa maitso Anosikely, taorian’ny nanaovany fanambarana hanaovana tanàna maty « ville morte » an’Antananarivo tamin’ny volana mey 2016, ka nanenjehan’ny fitondrana Rajaonarimampianina azy. Nosavaina ny tranony teny Andohanimandroseza.
Nosazian’ny fitsarana herintaona an-tranomaizina sazy mihatra miampy didy fampisamborana i Lylison René de Rolland araka ny didy nivoaka tamin’ny jona 2017. Herintaona taty aoriana, jona 2018, dia nisy didy vaovao nivoaka manafaka madiodio azy. Taorian’izay vao niverina namonjy fivoriana tao amin’ny Lapan’ny Antenimierandoholona izy.